Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » Ukuthengiswa kwee-smartphones ze-Samsung kuvaliwe eRashiya
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Shopping • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukuthengiswa kwee-smartphones ze-Samsung zivaliwe eRashiya.
NgoJulayi, iNkundla yoLamlo yaseMoscow yagweba i-Squin SA, inkampani yaseSwitzerland emangalela i-Samsung Electronics Rus Company malunga nokukhuselwa kwamalungelo awodwa epatent, kwaye yavala ukusebenza kwenkonzo yokuhlawula i-Samsung Pay.
Isamsung isenokubhena kwisigqibo senkundla yaseRussia kwinyanga enye yomhla yokwamkelwa kwayo.
Ukuthengisa kwe-Samsung kuthintelwe ngenxa yengxabano yelungelo elilodwa lomenzi ekusetyenzisweni kweNkonzo yokuHlawula iSamsung.
Isamsung Pay yaqaliswa ngo-Agasti 2015 kwaye yavela eRussia emva konyaka.
Ukuthengiswa kweemodeli ezingama-61 ze-smartphones ze-Samsung bekungavunyelwanga kwiRussian Federation ngenxa yengxabano yelungelo elilodwa lomenzi ekusetyenzisweni kwe Isamsung Pау Inkonzo.
Inkundla yoLamlo yaseMoscow ikhuphe isigwebo sokuthintela inkampani yaseRussia ye-Samsung Electronics ekuthengiseni ubuninzi beemodeli ze-Samsung eRashiya.
Ngokwenxalenye yokusebenza kwesigwebo esongezelelweyo senkundla yokuqala, ukuhanjiswa kunye nokuthengiswa kwe-Samsung Galaxy Z Flip, i-Samsung Galaxy Fold, i-Samsung Galaxy Z Fold 2, i-Samsung Galaxy S21, i-Samsung Galaxy S21 +, i-Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, I-Samsung Galaxy S20 FE, i-Samsung Galaxy S20, i-Samsung Galaxy S20 +, i-Samsung Galaxy S20 Ultra, i-Samsung Galaxy S10e, i-Samsung Galaxy S10, i-Samsung Galaxy S10 +, i-Samsung Galaxy S10 Lite, i-Samsung Galaxy S9, i-Samsung Galaxy S9 +, iimodeli ze-Samsung Galaxy S8 kunye nezinye azivumelekanga.
Isigqibo sinokubhenywa kungaphelanga inyanga ukusukela oko samkelwa.
NgoJulayi, iNkundla yoLamlo yaseMoscow yagweba i-Squin SA, inkampani yaseSwitzerland emangalela i-Samsung Electronics Rus Company malunga nokukhuselwa kwamalungelo awodwa epatent, kwaye yavala ukusebenza kwenkonzo yokuhlawula Samsung Pay.
Samsung Pay yasungulwa ngo-Agasti 2015 kwaye yavela Rhashiya emva konyaka. Ngokwe-Arhente kaZwelonke yoPhando lwezeMali ukusukela nge-Matshi 2021, i-32% yamaRashiya phakathi kwabasebenzisi beenkonzo zokuhlawula ngefowuni basebenzisa uGoogle Pay, u-Apple Pay-30%, uSmart Pay-17%.
Ngokwedatha yamva nje, ukuthengiswa kwee-smartphones ezisetyenzisiweyo Rhashiya inyuke nge-20% kwikota yokuqala ka-2021 xa kuthelekiswa nelo xesha linye ngo-2020.